ဟယ်ရီပေါ်တာ မိုဘိုင်းဂိမ်း လာမည့်နှစ်ထဲတွင် ထွက်ရှိလာနိုင်ဖွယ် ရှိ - Yangon Media Group
ဟယ်ရီပေါ်တာ မိုဘိုင်းဂိမ်း လာမည့်နှစ်ထဲတွင် ထွက်ရှိလာနိုင်ဖွယ် ရှိ
လော့စ်အင်ဂျလိစ် နိုဝင်ဘာ ၉
Pokemon Go ဂိမ်းကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် Niantic Inc ကုမ္ပဏီနှင့် Warner Bros Interactive အင်တာတိန်းမန့်တို့သည် ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် သတ္တဝါဆန်းများ၊ မှော်စွန့်စားခန်းနှင့် မှော်မန္တာန်များပါ​ဝင်မည့် ဟယ်ရီပေါ်တာ မိုဘိုင်းဂိမ်းကို ဖြန့်ချိရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုက နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
စာရေးဆရာမ JK Rowling ၏ မှော်ကမ္ဘာကို Harry Potter: Wizards Unite အဖြစ် မိုဘိုင်း ဖုန်းများထံ ဆောင်ကျဉ်းလာတော့မည်ဖြစ်ပြီး ကစားသမားများအနေဖြင့် နာမည်ကျော် ဝတ္ထုစီးရီးမှ မန္တာန်ရွတ်ဆိုမှု၊ စူးစမ်းရှာဖွေမှု၊ အသင်းဖွဲ့စည်းမှု၊ မှော်သတ္တဝါများ၊ ဇာတ်ကောင်များနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် AR နည်းပညာကို အသုံးပြုထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဂိမ်းတွင် အသုံးပြုမည့် တည်နေရာပြပုံစံမှာ ကစားသမားများအနေဖြင့် မိမိတို့ လက်တွေ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါ်လာသော ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များကို ဖမ်းဆီးရသည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် AR နည်းပညာဂိမ်းအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သော Pokemon Go ဂိမ်းနှင့် ဆင်တူသည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဂိမ်းဖြန့်ချိမည့်ရက်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း လာမည့်နှစ်တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်မည်ဟုဆိုသည်။
ဟယ်ရီပေါ်တာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Warner Bros Pictures ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက လာမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Fantastic Beasts and Where to Find Them2ကို ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းရုပ်ရှင်သည် စာရေးဆရာမ ရိုးလင်း၏ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဝတ္ထု နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်အဆက်ဖြစ်သည်။
The Bros ရုပ်ရှင် အညွန်း
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ညီလာခံ လက်ခံ ကျင်းပရန် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေး ကမ်းလှမ်း
့YBS မှ တစ်ဦးပိုင်ယာဉ်များ အများပိုင် ကုမ္ပဏီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲ ကုမ္ပဏီပိုင်ယာဉ်??
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်သွား ကားလမ်းဘေး ဝဲ၊ ယာတစ်လျှောက်ရှိ ပြောင်းရွှေ့ရန် ကြိုတင် အကြောင်းကြား??
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်၏ သမက်ဖြစ်သူ ပြူထိုင်းပါတီကို ဦးဆောင်မည် မဟုတ်
‘ဆေးမင်ရည်ချည်သောကြိုး’ ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီရိုက်ကူးမည်
အြွေကအခက်အခဲကြောင့် တိုးလ်ဂိတ်များတွင် လမ်းအသုံးပြုခကို ကျပ်ဂဏန်းအစွန်းအစား ရာပြည့်ဂဏန်??